21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Korontada | Shaqooyinka Dhinacyada Loo Yaqaano Korontada
Bogga ugu weyn 21 Hustle Side Bixinta Badan ee Loo -shaqeeyaha Korontada
Rabshadaha dhinaca korontada macnaheedu ma aha inaad si toos ah u dayacayso shaqadaada, waxay kaliya siinaysaa waddo kale oo dakhli lagu abuuro.
Shaqooyinka qaarkood, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad qaadato dhowr toddobaad oo tababar ah halka kuwa kalena aad u baahan tahay inaad yeelato xirfadda.
Si kasta oo xaalku ahaado, qof walba wuxuu mudan yahay il kale oo dakhli.
Markaa dhex mar qoraalkan oo soo hel guuxa dhinaca korontada oo laga yaabo inaadan waligaa ku fikirin inay jiraan.
Maskaxda ku hay in shaqooyinkani yihiin shaqooyin waqti-dhiman ah oo aad ka barbar shaqayn karto shaqadaada korontada. Qaar waa shaqooyinka habeenkii halka kuwa kalena ay yihiin shaqooyin maalmeed joogto ah.
Dhex mari tusmada tusmada si aad u hesho dulmar degdeg ah.
Waa Maxay Xamaasadda Dhinacyada Loo Yaqaano Korontada?
Koronto-yaqaan ahaan haddii aad iskii u shaqeysato iyo haddii kaleba, waxaad igu raaci doontaa in ay lagama maarmaan tahay in la yeesho riwaayado dhinac ah oo aad lacag ka samayn karto.
Waxaa jira maalmo qaar marka aad haysato xoogaa waqti firaaqo ah gacmahaaga. Markaa, halkii aad iska fogeyn lahayd, weli waad ka heli kartaa xoogaa lacag ah.
Maskaxda ku hay in aanan kula talinaynin inaad iska dayso saacadahaaga nasashada si aad lacag u hesho. Maya, waxaad ku dambayn doontaa inaad ku qarashgareyso biilasha isbitaalka.
Samee dheelitir u dhexeeya shaqada, waqtiga firaaqada, iyo waqtiga nasashada, markaa waxaad heli kartaa shaqooyinka dhinaca ku habboon.
Markaad tan aqbashay, arag buuqyada dhinaca sare ee shaqaalaha korontada ee hoos ku qoran oo aan lahayn amar gaar ah…
#1. Rakibaadda Cable
Wakhtiyadii ugu dambeeyay, mar kasta oo uu qof iibsado fiilada ama adeegga internetka, shirkaddu waxay u dirtaa mid ka mid ah shaqaalaheeda si uu ugu rakibo. Laakiin hadda sidaas ma aha maadaama shirkadaha intooda badani doorbidaan inay shaqaaleeyaan qandaraaslayaal si ay shaqada u qabtaan.
Markaa haddii aad u malaynayso inaad xamili karto rakibaadda adeegga fiilada iyo internetka, waxaad aadi kartaa fiilada xaafaddaada si aad u dalbato.
In kasta oo laga yaabo in lagaa rabo inaad soo marto dhowr toddobaad oo tababar ah, xaqiiqda ah inaad hore ula socotey xargaha korantada iyo rakibidda ayaa ka dhigaysa inay kuu noqoto hibo dhinacaaga ah.
Qaybta wanaagsan ayaa ah inaad ku shaqayn karto waqti-dhiman oo aad wali sii waddo shaqadaada joogtada ah taas oo ka dhigaysa shaqo dhinaca korontada kaamil ah.
#2. Qaado Baaritaano onlayn ah
Qaadashada sahannada internetka waa hab wanaagsan oo lagu kasban karo lacag caddaan ah oo koronto yaqaan ah. Inta aad haysato taleefankaaga gacanta iyo xiriirinta internetka, waxaad aadi kartaa goobaha sida Swagbucks, Iyo Sahan Junkie inaad qaadato sahan online. Marka la dhammaystiro tirada sahannada loo baahan yahay, waxaad heli doontaa lacag.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin dhammaan sahannada maxaa yeelay inta badan goobahan waxay leeyihiin shuruudo ay ku buuxiyaan.
Xor ayaad u tahay inaad mariso mid ka mid ah boggaga oo arag haddii aad buuxisay shuruudaha sahankooda. Haddii aad sidaas samayso, waa hab aad u fiican oo lagu kasban karo lacag caddaan ah oo dheeraad ah. Ka dib oo dhan, miyaanay ahayn sababta aad u raadinayso riwaayado dhinaca korontada si aad lacag uga hesho?
#3. Samee Bakhaarkaaga Korontada ee Adiga
Haddii aad hareeraha fiiriso, waxaad arki doontaa inaysan suurtogal ahayn in la helo meel aan koronto la isticmaalin. Sababta ugu badan ee ay tahay inaad u samaysato dukaankaaga korontada.
Si tan si wax ku ool ah loo sameeyo, waa inaad u heshaa meel wanaagsan meheraddaada. Goobtu waa furaha. Waa inay noqotaa meel wanaagsan oo meheraddaadu ku horumari karto.
Ka dibna tixgeli sahayda korontada ee aad ku kaydin doonto bakhaarkaaga. Hubi inaad kaydiso sahayda loo baahan yahay dhammaan nidaamyada- guriga, xafiiska, iyo goobta dhismaha. Ama si tartiib ah ayaad u qaadan kartaa markiiba.
Intaa waxaa dheer, hubso inaad baratid wax walba oo ku saabsan summadaha aad rabto inaad kaydiso iyo isticmaalkooda.
Habka maareynta habboon wuxuu kuu horseedaa habsami u socodsiinta dukaanka kaas oo isna dakhli kuu soo saari doona. Waxa kale oo aad alaabtaada ku iibin kartaa onlayn - sida Arbacada ah.
Dhinac wanaagsan ayaa ah in aad shaqaalaysiin karto shaqaale maamula dukaanka inta aad qabanayso shaqadaada caadiga ah. Waxaad go'aansan kartaa inaad si joogto ah u sameyso is-hubinta.
Dadka akhriya nuxurkan ayaa waliba akhriya 13 Sahamin onlayn ah oo kaash ah oo lagu bixiyo PayPal
#4. Dejinta Guriga iyo Rakibaadda
Cilmi baaris ayaa muujineysa in 60% guryaha Ameerika ay si otomaatig ah u noqonayaan kuwo iswada. Taas macnaheedu waa in ay jirto baahi loo qabo dadka rakibi kara oo hagaajin kara qaybahaas oo dhan. Laga soo bilaabo Alexa ilaa Siri, qof waa inuu meel dhigaa kuwan oo dhan.
Sida ku rakibidda fiilada, shirkaduhu waxay shaqooyinkaas siiyaan qandaraaslayaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto kooxda rakibidda, la xiriir shirkadaha iibiya alaabta.
Waxaad ku shaqayn kartaa xawligaaga taas oo ka dhigaysa inay u fiican tahay dhinaca korontada.
#5. Darawalka Uber
Haddii aad baabuur leedahay oo aad wadi karto, waxaad ka fiirsan kartaa inaad noqoto Uber darawal. Waxa ugu fiican ayaa ah inay leeyihiin jadwal dabacsan, ay ku siiyaan lacag dheeraad ah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee ugu sarreeya, oo ay ku siiyaan caymis intaad shaqada ku jirto.
Shaqo kale oo la yaab leh oo koronto yaqaan ah.
#6. Gacan -haye
Haddii aad samayn karto dayactirka guriga ee caadiga ah iyo dib -u -habayn yar, markaa tixgeli inaad noqoto nin gacan -qabad leh oo ah shaqo dhinac ah. Xitaa waxaad dooran kartaa inaad qabato shaqooyin koronto oo fudud sida beddelidda nalka ama qalabka.
Xirfadahasta oo aad leedahay kaaliye ahaan, sidoo kale waa lagu siin karaa lacag. Waxaad ku xayeysiin kartaa xirfadahaaga wargeysyada xaafadda lacag la'aan.
#7. Rakibaadda Laydhka
Haddii aad abuuri karto nalal khaas ah oo loo baahan yahay madadaalada gudaha ama dibedda ama xitaa hagaajin ama rakib, tani waa buuq dhinac ah oo aad lacag ka samayn karto.
Dad badan ayaa had iyo jeer isha u haya kuwa sudhan kara nalalka gaarka ah xilliyada ciidaha laakiin sababo kala duwan awgood ma heli karaan. Waxaad noqon kartaa qofka sidaas sameeya oo lacag ku qaata. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u xayeysiiso xirfadahaaga qofka saxda ah.
#8. Bixinta Cuntada/Raashinka/Xidhmada
Waxaad soo bandhigi kartaa inaad wax gaarsiiso dhammaan agagaarkaaga ama gobolkaaga guud ahaan. Baadhid Caqli -xumo, Dambiyadaha, ama xataa DoorDash. Shirkadahaani waxay si joogto ah ugu baahan yihiin dad cunto u geyn kara macaamiishooda goob kasta.
Sidoo kale, noocyada sida Amazon iyo Shixnad si joogto ah ugu baahan darawalada u gayn kara raashinka iyo baakadaha macaamiishooda. Shixnad ayaa sheegaya inaad kasban karto inta u dhaxaysa $ 16 ilaa $ 22 saacaddiiba markaad la shaqayso.
Waa hagaag markaa hore u soco oo samee lacag dheeraad ah xitaa koronto yaqaan ahaan. Ha iloobin, waxaad leedahay jadwal shaqo oo dabacsan.
#9. Tababarka Internetka
Uma baahnid inaad ogaato wax walba si aad awood ugu yeelatid inaad wax barato dadka kale. Ilaa iyo intaad si fiican u fahansan tahay maado gaar ah iyo xirfadaha isgaarsiinta wanaagsan, waad sii wadi kartaa inaad wax ku barato internetka. Qaar ka mid ah barayaasha internetka waxay kasbadaan qiyaastii $ 16 saacaddii.
Xitaa waxaad abuuri kartaa kanaal Youtube ah oo aad ku barato xoogaa talooyin ah iyo hacks rakibidda korantada. Iyada oo ku xidhan tirada aragtida iyo macmiisha aad leedahay, waxaad lacag ka heli kartaa Youtube -ka. Umeerinta onlaynka ah waxay cadeysay inay tahay shaqo wanaagsan dhinaca korontada waqti ka dib.
#10. Noqo Iibiyaha
Noqoshada iibiye waxay u noqon kartaa buuq kale oo wanaagsan oo loogu talagalay shaqaalaha korontada. In kasta oo ay u baahan tahay lacag caddaan ah si aad u iibsato alaabtaada, weli waad ka faa'iidaysan kartaa. Fikradda ganacsigu waa mid sahlan: iibso hoose, iibso sare.
Waxaad alaab ka soo iibsan kartaa dukaamada wax iibsiga ama ka hubi kartaa internetka. Waxaad ka eegi kartaa boostadayada sida loo noqdo dib -u -iibiyaha inay kaa caawiso inaad bilowdo meheradda dib -u -iibinta.
# 11. Rinjiye
Yaa yiri ma noqon kartid koronto yaqaan iyo sidoo kale rinjiile? Haddii aad rinjiyeyn karto, markaa waxaad sidoo kale lacag ugu kasban kartaa. Waxaad ku xayeysiin kartaa xirfadahaaga dhowr meelood oo internetka ah ama xitaa wargeysyada deriska si aad u hesho macaamiil.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad taqaanid sida loo rinjiyeeyo adigoon bixin qiyaaso, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la shaqeyso rinjiile xirfadle ah si aad u barato sida.
Iskusoo wada duuboo, waxaad wali kasban kartaa xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah oo aad ku shaqayso labada shaqo, taas oo ka dhigaysa shaqo wanaagsan dhinaca korontada.
Sidoo kale akhri tan 15 Shaqooyinka Habeenkii Ugu Fiican Oo Bixiya In ka Badan $ 50/Maalin 2021
#12. Dukaanka Hagaajinta Guriga
Dadka raba inay ka qayb qaataan mashaariicda DIY marar badan waxay caawimo uga baahan yihiin khubarada mashruuca. Tani waa sababta dukaamada sanduuqyada waaweyni badanaa u leeyihiin qandaraaslayaal kuwaas oo ay siiyaan shaqada noocan ah.
Markaa haddii aad ka shaqayn karto kooxdaan, la xiriir dukaamada maxalliga ah si aad qayb uga noqoto oo aad u hesho xoogaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah.
#13. Kiraynta AirBnB
AirBnB waa goob wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya inay kiraystaan ​​qol firaaqo ah ama guri dhan oo iyaga ah.
Waxaad u maleyn kartaa inay tahay fikrad xun maxaa yeelay waxay u egtahay cabsi cabsi gelinta shisheeyaha gurigaaga. Ha ka welwelin, AirBnB waxay bixisaa caymis dhaawac oo qiimihiisu yahay ilaa hal milyan oo doollar gurigaaga iyo ilaalinta iyo caymiska martigeliyaha.
Markaa haddii aad u raadinayso buuq dhinaca dhinac ah koronto yaqaanno kaa dhigi kara lacag wanaagsan, kani waa madal wanaagsan maadaama aad ku kasban karto ilaa $ 1000 isla markiiba ka dib marka martidu soo gasho.
#14. Eyga Socodka ama Fadhiga Xayawaanka
Hey Doglover, waxaa jira waddo lacag lagu kasbado iyadoon loo eegin koronto yaqaan. Uma baahnid wax xirfad gaar ah. Kaliya diyaar u noqo inaad saaxiibadeena dhogorta ah banaanka u soo baxdo oo aad lacag ku hesho si aad taas u samayso.
#15. Cawska Mow
Waxaad u tixgelin kartaa cawska goynta sida hustle dhinac ah. Maaddaama ay tahay shaqo xilliyeed (inta lagu jiro gu'ga iyo xagaaga), adiga ayaa gacanta ku haya inta shaqo ee aad qabato. Go'aanso haddii aad doonayso inaad la shaqayso shirkado dhulka hagaajiya ama aad kaligaa shaqayso. Xulasho kasta oo aad samayso, gunta hoose ayaa ah in lagu siiyo.
Haddii aad ku hadli kartid luqado badan, waxaad noqon kartaa turjumaan. Uma baahnid wax xirfado gaar ah. Kaliya waxaad awoodi kartaa inaad si habsami leh ugu turjunto luuqad kale. Kaliya la xiriir shirkadaha ama xarumaha warbaahinta ee u baahan turjumaano oo koontadaada bangiga kordhiso. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa shaqo dhinaca korontada.
# 17. Qoraa Madaxbanaan
Waxaa jira shirkado badan iyo guryo warbaahineed oo u baahan qorayaal iyo tafatirayaal. Qaarkood waxay leeyihiin qorayaal u gaar ah ama waxay u baxaan inay shaqaaleeyaan. Haddii aad ku fiican tahay ereyada iyo qorista, horay u soco oo ka codso qoritaanka madaxa bannaan internetka. Goobaha sida Dhallinta iyo Fiverr taageer qoraayaasha madaxa bannaan oo hubi inay lacag helaan.
Uma baahnid xirfado gaar ah si aad lacag ugu hesho qoraa madaxbanaan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad taqaan sida loo isticmaalo ereyada si sax ah. Waxaan dhihi doonaa kani waa dabacsanaanta dhinaca dabacsan ee koronto yaqaannada.
#18. Rakibaadda Baabuurka-Maqalka
Haddii tani u eg tahay shaqo aad qaban karto, ka dibna sii wad si aad u xayeysiiso xirfadahaaga. Tani waxay shaqo fiican u noqon doontaa shaqaalaha korontada oo hore u sameeyay wax sidan oo kale ah.
#19. Hawlaha Dalbashada
Haddii aad ku fiican tahay hagaajinta hawlaha si degdeg ah ama u socodsiinta hawlaha, markaa waxaad kasban kartaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah. Platforms -ka sida Handy ayaa kaa caawinaya inaad hesho hawlo aad isla markiiba dhammayn karto.
Arag tani U dhigma Sharadka USA: Sida loogu guuleysto Lacag wax ka yar 15 Daqiiqo
Bartending waa shaqo ku habboon kuwa shaqayn kara habeenkii. Haddii aad u malaynayso inaad wax -soo -saar yeelan karto habeenkii, markaa sugitaanka miisaska ama wax -ka -daba -ciyaarku waa hab kale oo lacag lagu kasbado iyada oo aan loo eegin xirfaddaada.
In kasta oo Bartending ay u egtahay shaqo fudud in la helo, waxaad u baahan doontaa heer waayo -aragnimo ah si aad uga shaqayso casinos weyn ama baararka. Waa mid ka mid ah xarakaadka dhinaca korontada ee u baahan tababar yar.
Eeg liiskayaga shaqooyinka ugu fiican habeenkii taasi waxay ku kasbataa wax ka badan $ 50/maalin.
Laakiin haddii aadan haysan, fiiri qoraalkayaga sida loo noqdo nin baarka ka shaqeeya oo aan khibrad lahayn oo u soco si aad u samayso lacag caddaan ah oo qabow!
#21. Macallin beddel ah
Isu -soo -uruurinta liiskayga ku saabsan guuxa dhinaca ee koronto -yaqaannada ayaa noqonaya macallin beddel ah. Gobollada badankood waxay kuu oggolaanayaan inaad noqoto macallin hoose oo leh shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Tan micnaheedu waxaa weeye koronto yaqaan ahaan, waxaad u shaqayn kartaa macallin beddel ah mar kasta oo aad haysato wakhti firaaqo ah. Waxaad la xiriiri kartaa nidaamka dugsiga deegaankaaga si aad u bilowdo.
Si Loo Duubo
Markaa halkaas waxaad ku haysataa, 21 dhinac oo ay ku mashquulsan yihiin shaqaalaha korontada. Phew! Waxaan dareemayaa inaan hadda uun badbaadiyey adduunka. Waxaan ula jeedaa yaa aan jeclayn in loo sheego shaqooyin dhinac ah oo kasban kara isaga/iyada lacag caddaan ah oo dheeri ah?
Hubi inaad dhex marto liistada si aad u ogaato mid ka mid ah hustles -kaan adiga kugu habboon. Qofna ma dhaawici doono haddii aad leedahay il kale oo dakhli.
Haddii aad leedahay riwaayado dhinac kale ah oo lacag kugu kasbanaya, si naxariis leh noogu soo sheeg sanduuqa faallooyinka ee hoose.
20 Shaqooyin oo Bixiya $ 30 Saacad 2021 | Lacag Caddaan ah
Sida Loo Sameeyo Lacag Xagaaga | 20 Siyaabood oo sugan 2021
21 Bixinta Badan Hustle Side ee Naqshadayaasha Gudaha
Sida Loo Helo TV -ga Cable ee Bilaashka ah ee Internetka Cable Sannadka 2021 -ka
13 Talooyin Degdeg ah oo lugu Waayi Karo Baruurta 2021 -ka
8 Aabbaha ugu Taajirsan Aabbaha ugu liita Casharrada Aabbaha ee Ganacsigaaga 2022
Helitaanka dariiq aad uga baxdo halgankaaga dhaqaale waa bilowga xorriyadda dhaqaale. Waxaad u shaqeysaa si aad ah…
Ahaanshaha soo saaraha muusikadu waa shaqo riyo ah oo badan. Soosaarayaasha muusikadu waa xirfadlayaal ka mas'uul ah qaabeynta ...
10 -Ka Ugu Qaalisan Ee Lagu Daabaco Guriga Iyo Xafiiska
Daabacadu maahan mid raqiis ah. Intaa waxaa dheer, waxaad fadhiisan kartaa kafateeriyada saacado gaar ahaan marka ay jiraan…
Ha ku kadsoomin baaxaddooda - fikradaha ganacsiga yaryar waxay leeyihiin awood weyn. Ganacsiyo yaryar oo wanaagsan oo leh…